Maxaa Cusub – Page 46 – Shabakadda Amiirnuur
Al-Shabaab oo Toogtay Sarkaal Caan Ka Ahaa Wada Jir.
Faahfaahin ayaa kasoo baxaysa weerar qorsheysan oo ay maanta ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ka fuliyeen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Sida aan warka ku heleyno sarkaalkan ayaa waxaa toogtay ciidan si gaar ah u tababaran, kuwaasoo si nabad galyo ah goobta uga dhaqaaqay. Ciidamo ka tirsan kuwa DF ayaa gaaray […]
James Swan oo Booqday Halkii 2 Bilood Ka Hor Lagu Dili Rabay oo Ah Xarunta Dowladda Hoose.
Kadib muddo laba todobaad ah oo Eeyo iyo ciidamo kala duwan ay baarayeen Xarunta gobolka Banaadir ayaa waxaa shalay si kadis ah oo saxaafadda laga qariyay halkaa ku gaaray ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan. Ergayga ayaa waxaa la socday ciidamo badan oo ilaalo ah waxaana loo […]
Askari Ka Tirsan Ciidanka DF oo Bajaajle Ku Dilay Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay fal dil bareer ah oo uu geystay askari ka tirsan ciidamada DF. Askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa madaxa iyo laabta ka toogtay wiil dhallin yaro ah oo darawal ka ahaa Mooto Bajaaj. Falkan dilka ah ayaa wuxuu ka dhacay xaafadda Siimaay oo ka […]
Qaramada Midoobay Iyo M/Afrika oo Ka Hadlay Culeyska Heysta Amisom.
Ciidamada shisheeye ee duullaanka ku jooga Soomaaliya waxay marayaan marxaladdoodii ugu adkayd tan iyo markii la keenay Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa shantii maalmood ee lasoo dhaafay kulamo ku yeeshay wakiillo ka kala socda Qaramada Midoobey iyo Midowga Afrika iyagoo ka wada hadlayay xaaladdan adag iyo qorshayaasha hor yaalla. Gorfayn badan […]
Gaari Gaashaaman oo Amisom Looga Gubay Sh/Hoose Iyo Sarkaal DF Ka Tirsan Oo Ceelasha Lagu Dilay.
Guutada Qaraxyada ee Xarakada Al-Shabaab ayaa waxay maanta weerar culus la tiigsadeen kolonyo ciidamo shisheeye ah oo ku socdaalayay Shabeelaha Hoose. Kolonyadan ayaa waxaa lagu helay inta u dhaxaysa Danow iyo Shalaambood, waxaana la xaqiijiyay in laga burburiyay gaari gaashaaman. Gaariga gaashaaman ee la qarxiyay ayaa waxaa saarnaa tiro askar […]
Halkee Buu Marayaa Dhaqaalaha Shirkadda Ugu Caanaha Ee Khaliijka.
Shirkadda Al-maraaci ee Sacuudi Carabiya, waa shirkadda ugu weyn ee caanaha Khaliijka, waxay sheegtay shalay oo Axad ahayd faa’iidada saafiga ah ee saddex-meelood meel ay 8.5% hoos ugu dhacday qiimaha iibinta iyo qaybinta sare iyo iibka hoose ee Baxrayn. Dakhliga shirkada wuxuu sii waday inuu hoos udhaco seddex xilli oo […]
Maxay Soomaaliya Dhibbane U Tahay? (Dhageyso)
Dalka Soomaaliya markaad dhan kasta ka eegto waa wadan dhibbane ah oo ay yar tahay meel u fayow. Soomaaliya waxay weysay xuquuqdeedii. Siyaasad ahaan dalku uma madax bannaana, ciidan ahaan iyo sharci ahaanna sidoo kale. Intaa waxaa dheer dadka Soomaaliyeed ma heystaan xuquuqdoodii aasaasiga ahayd sida iney nabad ku noolaadaan […]
Faahfaahin Kasoo Baxaysa Weerar Amisom Ku Qabsaday Sh/hoose.
Xog dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa weerar dhabba gal ah oo shalay ciidamada Uganda ku qabsaday gobolka Shabeelaha Hoose. Wararkii ugu dambeeyay ee aynu ka helnay dhacdadaas ayaa waxay xaqjiiniyaan in ciidanka Amisom la gaarsiiyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Kamiinka ayaa wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa Danow […]
Kolaneyl Soomaaliyeed oo Muddo 28 Jeer Ah Ka Dagay Diyaarad Hawada Ku Jirta. (Dhageyso)
Shariif Shaacib Muxamad, waa Kolaneyl kamid ah saraakiishii hore ee wadanka, gaar ahaan wuxuu kamid ahaa ciidankii Kumaandooska. Wareysi dheer oo aynu la yeelanay ayaa wuxuu kaga sheekeeyay taariikh nololeedkiisa iyo maraaxishii ay soo mareen ciidankii uu kamidka ahaa. Sheekadiisa waxaa ku jira qisooyin la yaab leh iyo aqoon dhanka […]
Degdeg: Dagaal U Dhaxeeya Al-Shabaab Iyo Amisom oo Sh/Hoose Ka Dhacay.
Dagaal u dhaxeeya ciidamada milatariga Xarakada Al-Shabaab iyo askarta shisheeye ee Amisom ayaa maanta ka dhacay gobolka Sh/hoose, kaasoo faahfaahin horu dhac ah laga helayo. Wararka ayaa waxay sheegayaan in dagaalku uu ka qarxay inta u dhaxaysa Danow iyo Kabtan Laas, kadib markii askar ka tirsan Amisom oo socdaal ku […]